कस्ले किन्ला इच्छाराज तामाङको सिभिल बैंकमा रहेको साढे ३१ लाख कित्ता सेयर ? « Clickmandu
प्रकाशित मिति :6October, 2021 1:58 pm
काठमाडौं । चर्चित घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीले ठगी आरोपमा असोज १८ गते पक्राउ गर्यो । यो घटनासँगै व्यवसायी तामाङको डाउनफल औपचारिकरुपमा शुरु भएको छ ।
रुसबाट सिभिल इन्जिनियरको अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किएका तामाङ सहकारी र हाउजिङ बिजनेशका कारण रातारात अर्बपति भएका थिए । आफ्नो प्रगतिलाई आफैंले सम्हाल्न नसकेर यतिखेर तामाङ प्रहरी हिरासतको चिसो छिँडीमा बस्नु परेको छ ।
तामाङ सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । उनी पक्राउ परेसँगै बैंकको अध्यक्षको पद जाने निश्चित भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, तामाङले व्यवहार मिलाउन सिभिल बैंकको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि तामाङ नैतिकरुपमा बैंकको अध्यक्ष पदमा बस्न मिल्दैन केही दिनभित्रमा राजीनामा आउने छ,’ बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘उनका कारणले बैंकको ब्राण्डमा समेत ठूलो असर परेको छ ।’
सिभिललाई अन्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि अफर गर्दा अध्यक्ष तामाङ नै त्यसको मूख्य बाधक बन्दै आएका थिए । जसकारण सञ्चालकहरु पनि उनीसँग सन्तुष्ट थिएनन् ।
‘बैंकमा लगानी गरेको १२/१५ वर्ष भइसक्यो, राम्रो प्रतिफल पाउन सकिएको छैन,’ अर्का सञ्चालकले भने, ‘राम्रो बैंकसँग सम्मानजनक मर्ज वा एक्वायारमा सहभागी होऔं भन्दा तामाङले दिँदैनथे ।’
अब बैंकको अध्यक्षबाट मात्रै होइन, बैंकको सेयरधनीका रुपबाट समेत तामाङको बहिर्गमन हुने सञ्चालकहरु बताउँछन् । किनभने सिभिल बैंक किन्नका लागि केही व्यक्ति तथा संस्थाले प्रयास गरिरहेका छन् ।
सिभिल बैंकमा इच्छाराज तामाङको २९ लाख ४५ हजार ७०० कित्ता र उनकी श्रीमति सिर्जना शाक्यको १ लाख ९५ हजार १ सय २२ कित्ता गरी कूल ३१ लाख ४० हजार ८ सय २२ कित्ता सेयर छ । यसबाहेक तामाङका आफन्तको नाममा केही लाख कित्ता सेयर रहेको सिभिल बैंकको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
व्यवहार मिलाउन गाह्रो परेपछि केही वर्षअघि तामाङले श्रीमति सिर्जनाका नाममा भएको १७ लाख ५३ हजार ५ सय ९४ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १७ करोड ५३ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बिक्री गरेका थिए ।
श्रीमान बैंकको अध्यक्ष भएका बेला श्रीमतीले सेयर बेच्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छल्न तामाङले श्रीमति सिर्जना शाक्यसँग नक्कली सम्बन्धबिच्छेद समेत गर्न भ्याएका थिए । कागजीरुपमा सम्बन्धबिच्छेद गरीका तामाङ दम्पती एउटै घरमा बस्दै आएका छन् ।
सहकारी र हाउजिङ व्यवसायबाट स्थापित भएका तामाङले बैंकको लाइसेन्स बाँड्न सहज भएको बेला राष्ट्र बैंकबाट सिभिल बैंकको लाइसेन्स लिन सफल भएका थिए । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेला एमालेको शक्ति लगाएर तामाङले बैंकको लाइसेन्स लिएको व्यापक चर्चा भएको थियो ।
ठगी आरोपमा तामाङ प्रकाउ परेपनि सिभिल बैंकको व्यवस्थापन र काममा भने त्यसको खासै असर हुँदैन । बैंकमा रहेको निक्षेप पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । तर, बैंकको इमेजमा भने असर परेको छ ।
‘अन्य सम्पत्तिमा लफडा छ भनेको बेला बिक्दैन, अब तामाङजीले बैंकको सेयर बिक्री गरेर व्यवहार मिलाउनुपर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंकमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गर्दा तामाङलाई ३१/३२ करोड रुपैयाँ आउँछ । जुन रकमले उनको व्यवहार मिलाउन ठूलो टेवा मिल्छ ।
कस्ले किन्ला तामाङको सेयर ?
पहिलो शंकर ग्रुपः सिभिल बैंक किन्नका लागि देशकै ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपले केही डिल गरिसकेको छ ।
‘मूल्य मिल्यो भने शंकर ग्रुप तामाङ दम्पत्तिको सेयर किनेर सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीका रुपमा चाँडै नै भित्रिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शंकर ग्रुप बैंकिङमा भित्रियो भने अन्य बैंक गाभेर वा किनेर देशकै ठूलो बैंक बनाउँछ ।’
किनभने, विभिन्न उद्योग तथा व्यापार गर्दै आएको शंकर ग्रुप पछिल्लो सयम आक्रमकरुपमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ । यो ग्रुपले गत वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो ।
पछिल्लो समय शंकर ग्रुप वित्तीय क्षेत्रमा आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएको छ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट देखिने गरी वित्तीय क्षेत्रमा हात हालेको शंकर ग्रुप हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो ।
आफूहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा हात हाल्न खोजिरहेको शंकर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले जानकारी दिए ।
‘केही वाणिज्य बैंकसँग कुराकानी भइरहेको छ, डिल मिल्यो भने चाँडै नै खुसीको खबर सुनाउँछौं,’ अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
अग्रवालले कुन बैंकसँग डिल भइरहेको छ भन्ने नबताए पनि स्रोतहरुका अनुसार पहिलो सिभिल बैंक हो भने दोस्रो एनबी बैंक हो ।
पछिल्लो समय सहकारी र घरजग्गाका कारण तामाङ फाइनान्सियल क्राइसिसमा छन् । उपयुक्त मूल्य पाए बैंकको सेयर बेचेर बाहिरिने तामाङको तयारी छ ।
दोस्रो हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकः यदि इच्छाराज तामाङको सेयर किनेर शंकर ग्रुप सिभिल बैंकमा प्रवेश गरेन भने सिभिल बैंकलाई हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्वायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी पुस मसान्तसम्ममा हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आपसमा गाभिएर हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकका नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दैछन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै सिभिल बैंक एक्वायर गर्ने आफूहरुको तयारी रहेको बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । रिटेल बैंकिङमा फोकस हुनका लागि उनीहरुले सिभिल बैंकमा नजर लगाएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन, हिमालयन र इनभेष्टमेन्ट बैंकलाई आपसमा मर्ज हुँदा सिभिल बैंकलाई पनि लिइदिन राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले नै आग्रह गरेका हुन् ।
‘राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले पनि सिभिल बैंकलाई एक्वायर गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्, सिभिल बैंककै लगानीकर्ताहरु ले पनि यस्तो आग्रह गरिरहेका छन्,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई पनि रिटेल बैंकिङका लागि सिभिल बैंक लिँदा फाइदा हुन्छ, त्यसैले पुसभित्र एकीकृत कारोबार गरेपछि सिभिलसँग कुरा अघि बढाउँछौं । मूल्यमा मिल्यो भने लिन्छौ पनि ।’
तामाङमाथि ७१ करोड ठगी गरेको अभियोग, अर्बौं कर्जा अपचलन
सिभिल सहकारी, सिभिल होम्स तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङलाई प्रहरीले सहकारीका बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो । सहकारीका १३७ जना बचतकर्ताले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
यसबाहेक सिभिल सहकारीको कर्जा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तामाङविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि छानविन अघि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेको दवावमा कारबाही रोकिएको थियो । स्मरण रहोस् तामाङ तत्कालीन एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य मनोनित समेत भएका थिए ।
सिभिल सहकारीले प्रबाह गरेको ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल ग्रुपका संस्थापक इच्छाराज तामाङका ३ वटा व्यवसायमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको पाइएको छ । आफ्नै संस्थाबाट आफैं संलग्न रहेको संस्थामा नक्कली ऋणी खडा गरी तामाङले आम सर्वसाधारणको अर्बौं रकम चलाएर कर्जाको दुरुपयोग गरेका थिए ।
तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्सले बनाएका हाउजिङले पनि सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नदिएको व्यापक गुनासो छ । शक्तिको आडमा तामाङले सम्पत्ति बेचेर ब्यवहार मिलाउनभन्दा अर्कै बाटो रोजेको उनी नकिटहरुको भनाइ छ ।
‘यस्तो संकट आउँदैछ भन्ने उनलाई पहिल्यै थाहा थियो, आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचेर व्यवहार मिलाउन सुझाव दिँदा शक्तिको आडमा तामाङ मिलिहाल्छ नि भनेर टार्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिल्यै मिलाएका भए कम्तिमा पुलिस हिरसतको चिसो छिँडीमा बस्नुपर्ने त थिएन, वर्षौं लगाएर कमाएको इज्जत स्वाहा हुने त थिएन ।